Kukura Bhizinesi neMedical Equipment: Mari uye Yekusarudza Sarudzo
Kufambira mberi kwesainzi yekurapa kwave kuvandudzika nekukurumidza zvakanyanya kubvira kutanga kwemidziyo yemazuva ano yekurapa. Mutsara wekurapa wekushandisa unotsanangura akasiyana maturusi anoshandiswa pakurapa uye kuongororwa. Oxygen matangi, matafura ekushanda uye zvishandiso zvekuvhiya ndeimwe mienzaniso mishoma yekurapa michina inoshandiswa mazuva ano.
Mimwe michina mitsva senge optometry equipotent uye iyo dermatologic laser-mwenje michina ichangobva kushandiswa kurapa matambudziko ekuona uye kusagadzikana kweganda zvichiteerana. Iyo yakanyanya kudhura mutengo wemhando idzi dzemidziyo inofanirwa kuve yakapihwa mari yakakwana kuti iwanikwe kuti ishandiswe zvakanyanya. Nekuda kweizvozvo varapi vakati wandei, makiriniki ekurapa uye masangano vakatendeukira kune mamwe maMedical Equipment Financing.
Heano mamwe akakosha ekurapa emazuva ano.
Dermatologic Laser Midziyo
Makwinya, mapanga eganda, kusabvisa bvudzi kusingadiwe, mapundu asingadiwe anotarisirwa zvakanaka kushandisa ichi chishandiso chemazuvano.
Medical Scale Midziyo
Kureba uye kurema kwemuviri zvine chekuita nechikamu chakakosha chebvunzo dzehutano hwepanyama. Zvakajairika kuyera uye kuyera zvishandiso zviripo izvozvi, zvisinei ichi chakasarudzika chishandiso chinotarisa chimwe nechimwe chazvo zvemagetsi. Panyama remara vanhu nemhuka vanogona kushandisa mhando iyi yemidziyo.
Mwenje yekuvhiya, tafura yezvipfuyo zvombo zvemazuva ano zvinobatsira pakuongorora hutano hwemhuka. Izvi pamwe chete nemidziyo yemushonga unodakadza chikamu chakakosha chekiriniki yemazuva ano yemhuka.
Chiremba Accounting Software
Chero sangano rinosanganisira ekurapa accounting rinoda makomputa uye yakakosha software yekugadzirira invoice yekurapa uye kumisikidza maakaundi anobhadharwa uye anotambirwa.
Pakati pezvakakosha zvikonzero zvinoita kuti zvimwe zvekurapa zvishandiso zvemari zvichidikanwa mutengo unoshamisa zvakanyanya wezvigadzirwa zvekurapa, zvinonetsa kune chero mumwe wezvekurapa nyanzvi kana kunyange kiriniki yekurapa kuti ikwanise. Kuwana iyo mari inogona kuve yakapusa nekuda kwekuvapo kwemakambani mazhinji akavimbika anopa mari pamutero wakaderera.
Makambani mazhinji anopa mari yekubvumidzwa nekukurumidza uye mamwe acho anobvumidza zvikwereti pazuva rimwe chetero chikumbiro chaitwa! Iwo mafomu anogona kuzadzwa online uye kana angobvumidzwa masangano ekurapa anogona kutanga kubhadhara mari yechikwereti muzvikamu zvepamwedzi. Iyo yekumusoro yakanaka kwazvo kune vezvekurapa uye makiriniki anoda izvi zvinodhura michina kuti vape iyo inodikanwa yekucheka masevhisi masevhisi kune avo varwere.
Iva Mutengesi Wemari